कसरी मिल्न थाल्यो मौसम विभागको भविष्यवाणी ? यस्तो छ भित्री कारण – जलजला अनलाइन
कसरी मिल्न थाल्यो मौसम विभागको भविष्यवाणी ? यस्तो छ भित्री कारण
Posted on February 7, 2019 February 7, 2019 Author Comments Off on कसरी मिल्न थाल्यो मौसम विभागको भविष्यवाणी ? यस्तो छ भित्री कारण
माघ २४, काठमाण्डौ । बिहीबारदेखि देशका धेरै ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुन्छ भनेर मौसमविदले तीन दिनअघि नै भविष्यवाणी गरेका थिए । नभन्दै बिहीबार बिहानैदेखि पानी पर्न थाल्यो ।
बिहीबार बिहानैदेखि देशभरिकै मौसम बदली भई धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ ।
पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभरिकै मौसम बदली भई धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका मौसमविद् सुवास रिमालका अनुसार आज देशका धेरै ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुनेछ । मध्य र पश्चिममा केही ठाउँमा भने ठूलो पानी पर्नुका साथै भारी हिमपात पनि हुनेछ । यसकै प्रभावले हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा भारी हिमपात र हिम पहिरो जाने खतरा रहेको बाढी पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ ।
बाढी पूर्वानुमान शाखाले सूचना निकालेर उच्च पहाडी क्षेत्रमा भारी हिमपात र पहाडी क्षेत्रमा ठूलो वर्षा हुन सक्ने भएकाले हिमपहिरो र पहिरो जानसक्ने भन्दै ती क्षेत्रमा सतर्क रहन आग्रह गरेको हो । पर्सि शनिबारसम्म देशभरका धेरै ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुने भएकाले केहि दिन पदयात्रामा ननिस्कन मौसमविद्ले सुझाव दिएका हुन् ।
मौसमविद् रिमालका अनुसार अस्तिदेखि नै बदली गराएको पश्चिमी वायु आइतबारदेखिमात्र सुधार हुने देखिएको छ ।
अर्थ/विकास खेलकुद मुख्य समाचार
दाङमा बन्ने भयो २४ करोडको लगानीमा रंगशाला
साउन ६, काठमाडौँ । मंसिरमा हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीतालाई मध्यनजर गर्दै दाङको बेलझुण्डीमा रंगशाला निर्माण गरिने भएको छ । मंसिर २१ गतेदेखि २८ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीताका लागि रंगशाला निर्माण गर्न लागीएको हो । रंगशाला निर्माणका लागि काठमाडौँमा रहेको दिवा एनए कन्ट्रक्सन जेभीले २४ करोड २४ लाख ४५ हजार दुई सय ९३ रुपैयामा […]
दाङ: यी हुन् बाटोमा भेटाएको डेढ तोला सुनका गहना फिर्ता गर्ने दङ्गाली चेली
वैशाख २४, दाङ । दाङमा एक महिलाले आफूले बाटोमा भेटाएको डेढ तोला सुनकागहना सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरेकी छन्। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ निवासी रूद्रकुमारी महरा आफूले भेटाएको डेढतोला सुनका गरगहना सोमबार प्रहरीको रोहवरमा सम्वन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरेकी हुन्। उक्त सुनका गरगहना घोराहीको वडा नं. १४ गोरखा टोल निवासी हरिदेवी वलीको रहेको भन्ने पुष्टि भएपछि […]
साउन १८, काठमाडौं । रुटपर्मिट नपाउँदा रोकिएको काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत रहेको एस ५ रुटमा आगामी शुक्रबार (साउन २५) देखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यसै साता रुटपर्मिट लगायत प्रक्रिया मिलाइसकेपछि बस सञ्चालनमा आउने भएको समाचार आजको कारोबारमा छापिएको छ । एस ५ रुट अन्तर्गत नयाँ बसपार्क-रत्नपार्क-सिनामंगल रुटमा रहेको टेम्पो विस्थापित […]
दाङमा नक्कली हस्ताक्षर गरेर एक लाख ४० हजार झ्वाम पारेपछि…
विदेशमा रहेका नेपालीलाई आयो अर्को यस्तो खबर